Dual Head Dog Deshedding Ngwá Ọrụ
1. Isi ihe eji achọ nkịta nkịta abụọ nwere ezé ezé na-ekesa iji wepu ntutu isi nwụrụ anwụ ma ọ bụ nke rụrụ arụ, eriri na tangles maka nsonaazụ kacha mma.
Isi ihe abụọ a na-achọ nkịta abụghị naanị na-ewepu mkpuchi ndị nwụrụ anwụ, kamakwa ọ na-enye ịhịa aka n'ahụ iji mee ka ọbara gbasaa akpụkpọ ahụ. Ezubere ezé iji banye n'ime uwe ahụ na-enweghị ịcha akpụkpọ anụ ụlọ gị.
3.The sọrọ isi nkịta na-achọ ngwá ọrụ bụ ergonomic na mgbochi ileghara soft handle.it dabara n'ụzọ zuru oke na aka. Enweghị aka ma ọ bụ nkwojiaka aka ma ọ bụrụhaala na ị na-ehicha anụ ụlọ gị.
Ahịhịa Dog Slicker ahịhịa nwere ike ịpụ apụ
1. Jiri nwayọ hichaa ntutu na ntụziaka nke ntutu. Ahịrị nke na-ewepu ntutu isi na-adịghị mma, kpochapụ ụdọ, eriri, dander na unyi tọrọ atọ.
2. Retractable atụdo ịzọpụta gị bara uru dị ọcha-elu oge. Mgbe pad ahụ jupụtara, ịnwere ike ịhapụ ntutu site na ịpị bọtịnụ na azụ nke mpe mpe akwa.
3. Akwụghachi nnukwu nkịta nkịkara mma nwere nkasi obi dị nro, pịa bọtịnụ dị n'elu ahịhịa iji hapụ ntutu. Ọ ga - enyere aka ịme nkịta ahụ dị mma ma na - atọ ụtọ.
Kemeghi Oxford Dog njikota
Ihe nkịta nkedo a na-eme ka a gbanye ya na sponge dị mma, ọ bụghị nrụgide n'olu nkịta, ọ bụ nhazi zuru oke maka nkịta gị.
Kemeghi oxford nkịta njikota ka na Elu àgwà breathable ntupu ihe. Ọ na-eme ka anụ ụlọ gị hụrụ n'anya dị mma ma dị jụụ ka ọ na-achịkwa gị njikwa.
Ihe mgbakwunye n'elu nke a na-eme ka ọ dịkwuo mfe ịchịkwa ma jee ije na-adọta nkịta na ndị agadi.
Ngwunye nkịta nkedo a na-agbanwe agbanwe nwere 5 nha, nke kwesịrị ekwesị maka obere ọkara na nkịta buru ibu.
Ihe nchacha ntutu nke Cat
1.Ihe a pusi na-ewepu ntutu nwụrụ anwụ na ntutu ntutu anụ ụlọ na-eme ka anụ ụlọ gị dị mma.
2.A na-eji rọba rọba nke nwere ihe nhichapụ ntutu mee ka roba dị nro nwere obere imewe, jiri ụkpụrụ electrostatic na-etinye ntutu.
3.Ọ ga-eji na ịhịa aka n'ahụ gị anu ulo na anu ulo ga-amalite zuru ike n'okpuru ngagharị nke pusi ntutu remover ahịhịa.
4.Ahịhịa kwesịrị ekwesị maka nha nkịta na nwamba niile. Ọ bụ ngwa ahịa anụ ụlọ dị mfe ma dị mfe iji, mee ka ime ụlọ gị dị ọcha na anụ ụlọ.
Nkịta ịhịa aka n'ahụ ịhịa aka
Nkịta ịsa ahụ ịhịa aka ahịhịa nwere rọba rọba, ọ nwere ike ịdọta ngwa ngwa ma wụsa ajị anụ si na uwe anụ ụlọ gị mgbe a na-ịhịa anụ ụlọ gị ma ọ bụ na-asa ya. Ọ na-arụ ọrụ dị ukwuu na nkịta na nwamba nwere nha na ụdị ntutu!
Ndụmọdụ nkasi obi dị na nkịta nkịta ịhịa aka n'ahụ na-enye gị nnukwu njikwa ọbụlagodi mgbe ahịhịa ahụ dị mmiri mmiri. Ahịhịa ahụ nwere ike inye aka wepu tangles na snarls nke anụ nwụrụ anwụ, na-eme ka uwe ahụ dị ọcha ma dị mma.
Mgbe ị na-ete anụ ụlọ gị, kpochapụ nkịta a na-asa ahụ na mmiri. Mgbe ahụ ọ dị njikere maka oge ọzọ eji.
123456 Osote> >> Peeji nke 1/15